किन निर्माणमा डिजिटल जुडाहरू प्रयोग गर्ने - Geofumadas
मार्च, 2019 इन्जिनियरिङ, नवाचारै
हामीलाई घेरिएको सबै कुरा डिजिटल हुँदैछ। यस्तो कुराहरू (IoT) को कृत्रिम बुद्धि र इन्टरनेट रूपमा विकसित प्रविधिहरू, प्रत्येक उद्योग को झन् महत्त्वपूर्ण भागहरु हुँदै गइरहेका छन् लागत, समय र अनुरेखता मामलामा छिटो र अधिक कुशल प्रक्रियाहरू बनाउने। डिजिटल जाँदै प्रत्येक उद्योगलाई कमसँग प्राप्त गर्न अनुमति दिन्छ। कम से कम यो तिनीहरूले संयोजन गर्न सक्छन् कसरी महसुस गर्न, गणना शक्ति र बौद्धिक एल्गोरिद्म नवीनतम अग्रिम लागि देख सेन्सर, लघुरूप, रोबोटिक्स र drones मा प्राविधिक विकासक्रम, तिनीहरूले पनि निर्माण उद्योग मदत छन् संग अनुकूलन पोइन्ट डिजिटल र शारीरिक संसारहरू कम समयमा सस्ता, हरियो र सुरक्षित भवन निर्माण गर्न।
यसको एउटा उदाहरण हो कि कसरी ड्रोनहरूले छोटो अवधिमा ठूलो संख्याको फोटो खिच्न अनुमति दिन्छ, योजना बनाउने कामलाई सजिलो बनाउँदै। तर केवल त्यो मात्र होइन, ड्रोनसँग रहेको सेन्सरमा निर्भर रहँदा डेटा पनि एकैचोटि प्राप्त गर्न सकिन्छ जसको साथ भौतिक विशेषताहरू पनि मोडेल गर्न सकिन्छ जसले सरल तरल पदार्थ फोटोग्राममेन्ट्रीलाई अधिक जोडिएको मान दिन्छ। यो अवधारणा जसले वास्तवमै एईसी उद्योगको अनुहार बदल्दै छ "डिजिटल जुम्ल्याहा" को हो र हालोलान्स हलोलेन्स २ प्रमाणको अभिवृद्धि वास्तविकताका उदाहरणहरू जुन हामीसँग मनोरञ्जन उद्योगको पछाडि धेरै छ।
हालैको गार्टनर रिपोर्टको अनुसार, "डिजिटल ट्विन" प्रवृति "आशाको पीक" मा पुगिरहेको छ। अरू के हो?5भित्र 10 वर्ष भित्र, यो प्रवृत्ति "उत्पादकता प्लेटूटो" सम्म पुग्नको लागि आशा गरिन्छ।
उभरिरहेको टेक्नोलोजीहरू 2018 को लागि गार्टनर हाइप चक्र
डिजिटल डबिन के हो?
एक डिजिटल ट्विन एक प्रक्रिया, उत्पादन वा सेवा को एक भर्चुअल मोडेल को संदर्भित गर्दछ। एक डिजिटल ट्विन एक वास्तविक विश्व वस्तु र यसको डिजिटल प्रतिनिधित्व को बीच एक लिङ्क हो जुन लगातार सेंसर डेटा को उपयोग गर्दछ। सबै डाटा भौतिक वस्तुमा स्थित सेन्सरबाट आउँछ। त्यसपछि डिजिटल प्रस्तुतिकरण दृश्य, मोडेलिंग, विश्लेषण, सिमुलेशन र थप योजनाको लागि प्रयोग गरिन्छ।
BIM मोडेलिंगको विपरित, डिजिटल जुम्ल्याहा स्थानिय प्रतिनिधित्व गर्ने वस्तुको सेवा गर्दैन। उदाहरण को लागी, एक लेनदेन प्रक्रिया, एक अलग फाईल, वा सरोकारवालाहरु र प्रशासनिक एकाइहरु बीच सम्बन्धको एक सेट।
अवश्य पनि, इन्फ्रास्ट्रक्चरको डिजिटल ट्विन सबैभन्दा आकर्षक छ, कमसेकम भू-ईन्जिनियरि ofको क्षेत्रमा। भवनको डिजिटल जुम्ल्याह सिर्जना गरेर, भवन मालिक र अपरेटरहरूले भवन भित्र हुने थुप्रै समस्याहरूलाई रोक्न सक्छन्, निर्माण रणनीति अपनाउँछन् र फलस्वरूप सुरक्षित भवनहरू हुन्छन्। उदाहरण को लागी, तपाई भवनको डिजिटल जुडवा बनाउन सक्नुहुन्छ र जाँच गर्नुहोस् कि यसले ठूलो भूकम्पमा कस्तो प्रतिक्रिया देखाउछ। नतीजामा निर्भर गर्दै, तपाईं भवनमा आवश्यक परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ, विपत्तिलाई प्रहार गर्नु र कामहरू गर्न बाट पहिले। यो कसरी भवनको डिजिटल जुम्ल्याहिको जीवन बचाउन सक्छ।
छवि शिष्टाचार: भवन SMARTIn शिखर 2019
डिजिटल जुड़ाइहरु एक इमारत डिजाइनर को वास्तविक समय मा उपलब्ध भवन संग सम्बन्धित सबै जानकारी को लागी अनुमति दिछन, जसको जीवन फाइल संग सम्बन्धित अवधारणा, डिजाइन, निर्माण, रखरखाव र सम्पत्ति को संचालन शामिल छ। यो निर्माण साइटको बारेमा सबै जानकारीको लागि तत्काल पहुँच प्रदान गर्दछ। यसले बिल्डर्सहरूलाई सधैं भित्री चीजहरूको पक्का हुन मद्दत गर्दछ, जस्तै कि बीमको आवश्यक उपायहरू।
हालैमा मार्क एनजर द्वारा सीटीओ, SMott शिखर 2019 इमारत मा MottMacDonald द्वारा साझा को रूप मा, जब डिजिटल जुडाइहरु को अद्यतन को आवृत्ति को बारे मा कुरा गरदै; "यो वास्तविक समयको बारेमा होइन, यो ठीक समयको बारेमा हो।"
निर्माणमा डिजिटल जुडिनहरूको प्रयोगको फाइदा।
प्रविधिको सही प्रयोगले प्रक्रियाहरू अझ प्रभावकारी बनाउँछ। उदाहरणका लागि, डिजिटल जुड़ाइहरू, सिमुलेशनहरूलाई प्राकृतिक र मानव निर्मित आपदाहरूको कारणले गर्दा क्षति लाग्न सक्छ। उनीहरूले नागरिकहरूलाई सुरक्षित जीवन बिताउन मद्दत गर्न सक्छन्। उदाहरणका लागि, इन्फ्रास्ट्रक्चरको अवस्थामा जहाँ पैदल यात्री सिमुलेशन सफ्टवेयरको प्रयोग गरेर धेरै ट्राफिक हुनु पर्छ, हामी भविष्यवाणी गर्न सक्छौं र त्यहाँ कहाँ पुग्न सकिन्छ। पूर्वाधारको डिजिटल मोडेलमा आवश्यक परिवर्तनहरू शुरू गरेर, यो अधिक मात्रामा सुरक्षा, दक्षता र सम्पत्तिको निर्माण र रखरखावमा कम परिचालन लागत प्राप्त गर्न सम्भव छ।
निर्माणमा डिजिटल जुडिनहरू प्रयोग गर्ने फाईलहरू धेरै छन्। तिनीहरूमध्ये केही तल विस्तृत छन्:
निर्माण प्रगतिको निरन्तर निगरानी।
एक निर्माण साइट को वास्तविक समय को निगरानी डिजिटल डबिन को माध्यम ले सत्यापित गर्दछ कि पूरा कार्य योजनाहरु र विनिर्देशों संग संगत छ। डिजिटल जुडाइहरूसँग, यो मोडेलमा परिवर्तनहरू, दैनिक र घण्टापछि, र कुनै विचलनको स्थितिमा ट्रयाक गर्न सम्भव छ, छिटो कार्य लिन सकिन्छ। यसको अतिरिक्त, कंक्रीटको अवस्था, स्तम्भमा दरार वा निर्माण स्थलमा कुनै पनि विस्थापनको सामग्री सजिलैसँग डिजिटल ट्विनमा प्रमाणित गर्न सकिन्छ। यस्तो खोजहरूले अतिरिक्त निरीक्षणहरू र समस्याहरूको सामना गर्दछन् र चाँडै पत्ता लगाएका छन्, अधिक प्रभावकारी समाधानहरूको लागी।
स्रोतहरूको अनुकूलतम प्रयोग।
डिजिटल जुडाइहरू पनि स्रोतहरूको अझ राम्रो आवंटनमा लाग्दछन् र कम्पनीहरूले अनावश्यक सामग्रीहरू प्रयोग गरेर उत्पादक समय गुमाउनदेखि बचाउन मद्दत गर्छन्। यस प्रविधिको प्रयोगको साथ, अत्यधिक आवंटनबाट जोगिन सकिन्छ र यो साइटमा संसाधन आवश्यकताहरु गतिशीलताको पूर्वानुमान पनि सजिलो छ।
यद्यपि उपकरणहरूको प्रयोग पनि ट्र्याक गर्न सकिन्छ र अप्रयुक्त अन्य कार्यहरूको लागि जारी गर्न सकिन्छ। यसले समय र पैसा बचत गर्दछ।
सुरक्षा साइटहरु मा सुरक्षा एक ठूलो चिन्ता हो। डिजिटल जुड़ाइहरू, कम्पनीहरू मानिसहरूलाई ट्रयाक गर्न र निर्माण साइटमा खतरनाक स्थानहरूलाई अनुमति दिन अनुमति दिन, असुरक्षित क्षेत्रहरूमा असुरक्षित सामग्री र गतिविधिहरूको प्रयोगबाट बच्न सहयोग पुर्याउँदछ। वास्तविक-समयको जानकारीको आधारमा, प्रारम्भिक अधिसूचना प्रणाली विकसित गर्न सकिन्छ जुन निर्माण प्रबन्धकलाई थाहा छ जब क्षेत्रीय कार्यकर्ता असुरक्षित क्षेत्रमा अवस्थित हुन्छ। एक सूचना घटनाबाट पोर्टेबल यन्त्रमा पनि पठाउन को लागी खतरा रोक्न पनि पठाउन सकिन्छ।
निर्माणमा डिजिटल ट्विन प्रविधि प्रयोग गर्ने फाइदाहरू धेरै छन्। पुरानो बानीहरू कठिन छन्, तर निर्माणमा अधिक दक्षता प्राप्त गर्न, यो डिजिटल जाने आवश्यक छ। डिजिटल ट्विन टेक्नोलोजीको प्रयोगले आधारभूत संरचनाको विकासमा धेरै ठूलो नवाचार ल्याउन सक्छ र गुणस्तर र क्षमतालाई नयाँ हाइट्समा ल्याउन सक्छ। उद्योगलाई परिवर्तनशील डिजिटल वातावरण तयार र अनुकूल गर्नु पर्छ!
यसको एउटा उदाहरण
हामीसँग लन्डनमा गत वर्ष ब्राजिलका सहकर्मीहरूको अन्तर्वार्ताको अवसर थियो। डिजिटल जुडवाको प्रयोग गरेर ब्राजिलको गभर्नडर होसे रिचा एयरपोर्ट (SBLO), दक्षिणी ब्राजिलको चौथो ठूलो एयरपोर्ट एयरपोर्ट डाटा प्रबन्ध गर्न र यसको सञ्चालनमा अझ बढी दक्षता प्राप्त गर्न राम्रोसँग सक्षम छ।
राम्रो डाटा हवाई विमानस्थलमा अपरेटर SBLO व्यवस्थित गर्न आवश्यकता महसुस, Infraero वास्तविकता को एक जाल र सबै विमानस्थल डाटा लागि केन्द्रीय रिपोजिटरी, पूर्वाधार, भवन, भवन प्रणाली सहित रूपमा कार्य गर्ने एक डिजिटल जुम्ल्याहा सिर्जना गर्न निर्णय , सुविधाहरू र नक्साहरू र व्यवस्थापन डेटा।
बीआईएम र जीआईएस बेंटेले अनुप्रयोगहरूसँग अवस्थित 20 सुविधाहरू मोडेल गर्न प्रयोग भएको थियो, जुन हवाईअड्डी सतहको 920,000 वर्ग मीटर भन्दा अधिक छ। तिनीहरूले पनि ल्यान्ड अफ र ल्यान्डिंग रनवे, दुई विमानन गज र ट्याक्सीवे प्रणाली र पहुँच सडकहरू पनि ढाल्यो। परियोजना प्रोजेक्टले योजना निर्माण र सुधार सम्बन्धी परियोजनालाई सुधार गर्न एक प्यारामिटर डाटाबेस सिर्जना गर्यो।
प्रोजेक्ट टोलीले हवाईअड्डाको डिजिटल ट्विन सिर्जना गर्यो जुन हवाई अड्डा तथ्याङ्क स्क्रिन र सबै हवाईअड्डा डेटाको लागि एक केन्द्रीय भण्डार समावेश गर्दछ। केन्द्रीय भण्डारले प्रयोगकर्ताहरूलाई हवाईअन्तर्गत आधारभूत ढाँचा भित्र प्रणालीको सही पहिचान गर्न, सुरक्षित र कुशल अपरेसनको साथ व्यवसाय व्यवस्थापन सुधार गर्न मद्दत गर्दछ। डिजिटल ट्विनले सबै भविष्यमा आन्तरिक हवाईअन्तर्गत पूर्वाधार परियोजनाहरू साथै साथै योजना र व्यवस्थापन प्रक्रियाहरू लाई पनि सुदृढ बनाउनेछ। डिजिटल ट्विनको सहयोगको साथ, इन्फ्राेरोले मर्मत लागत कम गर्न र एसबीओएलमा एक बेहतर हवाईअन्य संचालन प्राप्त गर्न सक्छ। प्रोजेक्ट टोलीले प्रति वर्ष ब्यान्ड 559,000 भन्दा बढी बचत गर्न अपेक्षा गर्दछ। संगठनले पनि यसको मुनाफामा वृद्धि देख्ने आशा गर्दछ।
सफ्टवेयर प्रयोग गरियो
ProjectWise हवाईअड्डी एकीकरण प्लेटफार्म सिर्जना गर्न प्रयोग भएको थियो, जसले परियोजनाको जगेडा डेटा वातावरणको रूपमा सेवा गर्यो। माइक्रोस्टेशन पोइन्टको आयात क्षमताले क्लाउडलाई बिन्दु बादलहरू प्रयोग गरेर सबै हवाईअन्तर्गत सुविधाहरूको वास्तविकता ग्रिड सिर्जना गर्न अनुमति दिएको छ। OpenBuildings डिजाइनर (पूर्व AECOsim भवन डिजाइनर) डिजाइन मदत र विमानस्थल सुविधा पुस्तकालयहरु संगठित र यात्री टर्मिनल, कार्गो टर्मिनल, आगो स्टेशन र अन्य अवस्थित भवन मोडेल। टीमले ओपनआरड्सको प्रयोगमा ज्यामिति प्रोजेक्ट र रनवे, ट्याक्सीई र सेवा सडकको लागि रनवे प्रणालीको सतह नक्शा सिर्जना गर्न प्रयोग गर्यो।
अघिल्लो पोस्ट«पछिल्लो ओरेकल २०१ World वर्ल्ड जियोस्पाटियल फोरममा एक सहयोगी प्रायोजक हुन्
अर्को पोस्ट #GeospatialByDefault - Geospatial फोरम २०१।अर्को »